News | khan
21 Apr 2018 | शनिबार, ८ बैशाख, २०७५ | Edition : Nepal | UK | Australia | Global
News | Tag: khan
'२० वर्षसम्म सलमान खानलाई टक्कर दिएको समुदाय'
बिबिसी । बियाबान मरूभूमिमा उनीहरू वन्यजन्तु र बोटबिरूवाका रक्षक हुन्। बिश्नोइ समुदायका मानिसहरू वन्यजन्तु र बोटबिरूवाका लागि ज्यान दिन पनि तयार हुन्छन्।
प्रेममा सधै असफल रहे सलमान खान, यी युवतीहरुसँग थियो उनको प्रेम सम्बन्ध
एजेन्सी । सलमान खानको जीवनमा धेरै युवतीहरुको प्रवेश भयो । तर, छोटो समयमा नै ती सम्बन्धहरु टुटे । कति युवतीप्रति सलमान खानको ठुलो लगाव रहेको थियो भने केही युवतीहरु सलमान भनेसी मरिहत्ते गर्थे । सलमान खान अझै पनि अविवाहित नै रहेका छन् ।
यसकारण बिग्रिएको थियो यी कलाकारहरुसँग सलमान खानको सम्बन्ध
एजेन्सी । बलिउडका ‘सुल्तान’ सलमान खानका केही यस्ता चर्चीत बलिउड अभिनेता तथा अभिनेत्रीहरु छन् जो उनीसँग काम गर्न र बोल्न पनि रुचाउँदैनन् । एक समय राम्रो सम्बन्ध रहेका यस्ता पात्रहरुसँग सलमान खानको सम्बन्ध एकाएक बिग्रिएको थियो ।
बाल्यकालमा यस्ता हर्कतहरु गर्थे सलमान खान
एजेन्सी । जब सलमान खान ग्वालिएरको सिंधिया स्ुकलमा पढ्थे उनको छुट्टी मनाउने मनपर्ने स्थान इन्दोर रहेको थियो । सलमान खानको धेरै जसो समय साइकल चलाउनमा व्यस्त थिए । साथीहरुसँग मिलेर आँप झार्ने जामुन खसाल्ने जस्ता काम उनले बाल्यकालमा धे
यसरी सुपरस्टार बने शाहरुख खान
एजेन्सी । शाहरुख खानले अजबगजब लाग्दो रहस्य बाहिर ल्याएका छन् । बलिउडमा किङ खान बनाउन मदत गर्ने एक अभिनेताको नाम उनले लिएका छन् । उनलाई सुपरस्टार बनाउन अरमान कोहलीको महत्वपुर्ण हात रहेको बताएका छन् ।
यी हुन बलिउड नायक नायिकाका डरलाग्दा स्टन्ट दिने डुप्लिकेटहरु
एजेन्सी । सिनेमाको पर्दामा जब स्टारहरु धमाकेदार स्टन्ट गर्दछन तब दर्शकहरु तालि बजाउन थाक्दैनन् । तर के तपाईलाई थाहा छ, यस्तो डरलाग्दो स्टन्ट हाम्रा मनपर्ने नायक नायिकाले होइन उनीहरुका स्टन्टमेन वा ‘बडि डबल’ले गर्ने गर्छन् ।
यी हुन् सलमान खानकी पहिलो प्रेमिका
बलिउड–सलमान खानको बायोग्राफी ‘बिङ सलमान’ मा उनको पहिलो प्रेमिकाबारे लेखिएको छ ।
ऐश्वार्यलाई बहिनी बनाउनु पर्ने भएपछि सलमान खानले...
एजेन्सी–बलिउड अभिनेता सलमान खान र अभिनेत्री ऐश्वर्या रायको सम्बन्ध सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । कुनै समय यो जोडीले बलिउडमा ठुलै चर्चा पाएको थियो । आजसम्म पनि उनीहरुबारे चर्चा हुन छाडेको छैन ।
बाल्यकालमा कस्ता थिए सलमान ? थाहा पाउनुहोस् उनीबारे रोचक तथ्यहरु
बलिउड–जब सलमान खान ग्वालिएरको सिंधिया स्ुकलमा पढ्थे उनको छुट्टी मनाउने मनपर्ने स्थान इन्दोर रहेको थियो । सलमान खानको धेरै जसो समय साइकल चलाउनमा व्यस्त थिए ।
किन आमिर खानको हात खुट्टा बाँध्न चाहन्छन् सलमान खान ?
बलिउड–बलिउडका स्टार सलमान खानले आमिर खानको बारेमा आश्चर्य लाग्दो बयान दिएका छन् । उक्त बयानले यतिखेर बलिउडमा खैलाबैला मच्चाएको छ ।
किन अरबाज खानलाई मलैकाको परिवारले बोलायाे ?
बलिउड–अरबाज खान र मलैका अरोरा खानको डिभोर्स भइसकेको छ । तर, डिभोर्स भएपनि खान परिवारले मलैकालाई आफ्नो परिवारको सदस्य मान्छन् । त्यस्तै अरबाज खानलाई पनि अरोरा परिवारले आफ्नै परिवारको सदस्य मान्छन् ।
यी अभिनेत्रीको पत्र पढेपछि भावुक भए आमिर खान
बलिउड अभिनेता मिस्टर परफेक्शनिष्ट आमिर खान आफ्नो भावुक स्वभावका लागि पनि चर्चीत रहेका छन् । तपाईले धेरै जसो उनलाई फिल्ममा रोएको देख्नुभएको छ होला । तर, यस्तो एउटा मौका पनि आयो जब उनले आफ्नो आँशु रोक्न सकेनन् ।
कार्यक्रम गर्न लण्डन आएकी नायिका छुल्ठिमलाई म्युजिक भिडियो बोनस
भियाग्राका गम्भिर असरहरु
काठमाडौँ । उमेर पुगेका हरेक व्यक्तिलाई यौनको चाहाना हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ तर यदि कोहि महिला वा पुरुषलाई यौन चाहानामा गडबढी हुनु पनि सामान्य हुँदै गएको छ ।
यी हुन् दुनियाँकै सबैभन्दा ‘सेक्सी’ अपराधी महिला
ल्यापटपमा अश्लिल भिडियो हेर्दै प्लेनभित्रै हस्तमैथुन गरेपछि...